अमानवीय क्रियाकलापमा संलग्नलाई उन्मुक्ति मिल्दैन ः गृहमन्त्री – NepalDubai.com
अमानवीय क्रियाकलापमा संलग्नलाई उन्मुक्ति मिल्दैन ः गृहमन्त्री
चितवन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समाजमा हुने अमानवीय क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरुलाई उन्मुक्ति नदिन प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
२५ श्रावण २०७५, शुक्रबार १३:५१ मा प्रकाशित
प्रदेशसभाको बैठक दुई पटक स्थगित
डा. गजुरेलको जीवन रक्षा नगरे सामूहिक आमरण अनशन बस्ने चेतावनीडा. गजुरेलको जीवन रक्षा नगरे सामूहिक आमरण अनशन बस्ने चेतावनी
तारजालीमा अज्ञात पक्षबाट क्षति